Tag: ọhụrụ tweet
Mgbe mbụ m bidoro mmemme ihe dị ka afọ iri abụọ gara aga, enwere m otu onye ọrụ ibe m bụ onye ọkaibe na onye na - ese ihe. Oge ọ bụla m jiri aka nri m rute ebe ahụ, ọ ga na-amabeghị ihe ọ bụla gbasara inwe oke nkwarụ. Ya mbipute bụghị dị ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi ma na-mgbe fụchie na ụfọdụ okwu rụrụ arụ na-adịghị mma maka ọrụ… ma m digress. Afọ iri abụọ ka e mesịrị, m ka na-adabere na oke m. Nke ahụ kwuru, enwere m ihe